Firefox browser ကို နှစ်ဆပိုမြန်အောင် ဘယ်လို speed up လုပ်မလဲ - MYSTERY ZILLION
Firefox browser ကို နှစ်ဆပိုမြန်အောင် ဘယ်လို speed up လုပ်မလဲ
(၁) Address Bar ထဲမှာ about:config ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
(၂) Filter Search Bar ထဲမှာ Network.http.pipelining ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။ Value Field မှာ Double Click ခေါက်ပြီး True အဖြစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပါ။
(၃) Filter Search Bar ကိုပြန်သွားပါ။ Network.http.pipelining.maxrequests ကို ထပ်ရှာပါ။ ဒီ Option ပေါ်မှာ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို (8) ပြောင်းပါ။
(၄)network.http.proxy.pipelining အားထပ်ရှာပါ။ Double Click ပေးပါ။ တန်ဖိုးကို True ပြောင်းပါ။
(၅)filter Search Bar ထဲမှာ Network.dns.disableipv6 ကိုရှာဖွေပြီး Double Click ပေးခြင်းဖြင့် Value ကို True အဖြစ်ပြောင်းပါ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ Application တစ်ခုခုကြောင့် Page Loading ရုတ်တစ်ရက်ရပ်တန့် ခြင်းကို တုန့်ပြန်မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို Right Click (apple User များ - Ctrl+click) ပေးပါ။ New မှတစ်ဆင့် Boolean ကို ရွေးပါ။ New Boolean Value Pop-up Window ထဲမှာ Content.interrupt.parsing ကိုတည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ New Boolean အတွက် Value ကို True ကိုရွေးပါ။ Ok ပေးပါ။
(၇) Page Loading လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည့် Rendering လုပ်ခြင်းအား အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တုံ့ပြန်မှု မဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
- about:config Window အတွင်းမှာပဲ Right Click ထပ်ပေးပါ။ Pop-up Menu မှတဆင့် New ကိုရွေးပါ ၊ ထိုမှတဆင့် Integer ကိုရွေးပါ။
- New Integer Pop Up Menu အတွင်း Content.max.tokenizing.time ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို 2250000 ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။
ဒါကတော့ စာမျက်နှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကူး စောင့်ဆိုင်းချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။
- Content.notify.interval ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။value ကို 750000 <ပေးပါ။ Ok လုပ်ပါ။
မိမိအသုံးပြုပြီးသား စာမျက်နှာတစ်ခုကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ စောင့်ဆိုင်းချိန်နည်းပြီး ပိုမိုသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Boolean ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.ontimer ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok ပေးပါ။ Value ကို True ရွေးပြီး Ok ပေးပါ။
Timer-based Reflows တွေကို အမြင့်ဆုံး နံပါတ်အထိ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါတယ်။
-about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.notify.backoffcount ကိုရိုက်ပြီး Ok ပေးပါ။ Value ကို5ပေးပြီး Ok လုပ်ပါ။
ဒါကတော့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကနေ ဒေတာတွေကို အလွဲအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင်လျော့ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။
- about:configwindow ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Content.switch.threshold ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Ok လုပ်ပါ။value ကို 750000 ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။
မီးမြေခွေးနဲ့ ၀ဘ်စာမျက်နှာတွေဖွင့်တိုင်းမှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာမရောက်မှီ အမှန်တစ်ကယ် မလိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ အများအပြား ကိုပါ မီးမြေခွေးက ဒေါင်းလုဒ်ချ လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စောင့်ဆိုင်း ချိန် အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ထား နိုင်ပါတယ်။
- about:config Window ရဲ့ မည်သည့်နေရာမှာမဆို Right Click ပေးပါ။ New ကိုရွေးပါ။ Integer ကိုရွေး Ok ပေးပါ။ Nglayout.initialpaint.delay ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok လုပ်ပါ။ Value ကို0ထားပါ။ Ok ပေးပါ။
ကဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါ . တစ်ကယ့်ကို နှစ်ဆ မြန်သွားပါလိမ့်မယ် ..
copy from www.mdy.it.com
အဲ့လိုပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Disadvantage တွေရှိနိုင်ပါလား? ရှိရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ အစ်ကို?
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တို့ အခုလို firefox ကို speed up လုပ်လိုက်လို့ ဆိုးကျိုးတွေ လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလိုက်တာက firefox ၇ဲ့ ရိုးရိုး setting တွေပါ။
web page တစ်ခုကို loading လုပ်တာမြန်ဖို့အဓိက လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် နဂိုကတည်းက Firefox ကနေ အဲ့ဒီ Setting တွေကို တစ်ခါထဲချိန်ပြီးတော့ Released မလုပ်တာလဲ? အဲ့လို စကတည်းက နှစ်ဆ မြန်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလား အစ်ကို?
ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော် တို့သုံးတဲ့ firefox က beta version ပါ။ လိုအပ်ချက်ဆိုတာ တော့ရှိမှာပါ။ တချို့နိုင်ငံတွေ မှာတော့ ၀ယ်သုံးတယ် အကို။ ကျွန်တော် လည်း၀ယ်မသုံးဘူးတော့ မသိဘူး။software တွေဆိုတာ ထွက်ပြီး၊သုံးပြီး မှ လိုအပ်ချက် ၊ အားနည်းချက်တွေ တွေ့လာတာပါ။ ဒါကြောင့် version တွေထက်ထွက်လာကြတာ။အကို ပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ဘာလို့ အစကတဲ က ဒီ setting တွေ မသုံးတာလဲ။ ဒါက သုံးတဲ့ လူတွေတိုင်း အတွက် software တစ်ခုဆီမှာ default setting ဆိုတာထားပေးထားတယ်။
ဒါက အကုန်လုံးအတွက် ကိုက်ညီအောင်ထားပေးထားတာ။ ကိုယ်က မကြိုက်၇င် ကိုယ်ဘာသာ manual setting ပြင်လို၇တယ်။ အခုဒီ firefox speed up setting ကလဲ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်၇င် ပြင်။ မကိုက်၇င် မပြင် နဲ့။ ဒီသဘောပါပဲ။ ကျွန်တော် တို့ game တွေ ဆော့၇င်တောင် default setting ထားမယ်ဆို၇င် ကိုယ့်စက် နဲ့ မကိုက်၇င် ကိုယ်ဘာသာ manual setting ပြင်၇တယ်။ ဒါမှ ဆော့လို့ ၇တယ်။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
Can's we called this as Disadvantage?
Whatever, thanks bro. Nice Discussion.
Nyan Linn Myat wrote: »
I think firefox is free and opensource
Ko Morris is right. Firefox isafree and open source web browser descended from the Mozilla Application Suite and managed by Mozilla Corporation.
ya .. Firefox isaFLOSS ... ၀ယ်သုံးရတယ်လို ့တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး ..
you can read every setting detail in
The only thing is just to pay more to the ISP, and you'll get faster speed.